THATHA UHAMBO LOKUBETHWA NGUMOYA KWINDLU YAMAPLANGA Wichita Mountains Ft Sill - I-Airbnb
THATHA UHAMBO LOKUBETHWA NGUMOYA KWINDLU YAMAPLANGA Wichita Mountains Ft Sill
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLarry & Julie
ULarry & Julie yi-Superhost
Ithe nca emazantsi eentaba iWichita, i-The Take a Hike Cabin at The Lazy Buffalo ibonisa indawo entle ekulindileyo kwiiNtaba zeWichita apho unokufumana iimayile neendlela ezilindele ukubonwa.
Indlu yamaplanga iyakwazi ukusetyenziswa ngabantu abaneziphene.
I-Lazy Buffalo inezindlu zamaplanga eziyi-5. Indlu Yamaplanga Yokunyuka Intaba ngumnyango wesi-5 ukusuka ekhohlo xa ujonga kwi-Lazy Buffalo nangaphantsi kophahla oluhlaza.
Indawo evulekileyo yokunyuka intaba Indlu yamaplanga inebhedi enkulu uze usonge ishawa enethayile eneendawo zokubambelela zabantu abakhubazekileyo. Iinkuni ezenziwe ngamaplanga, i-knotty pine, kunye neethayile ezisetyenziswa kuyo yonke indlu yamaplanga enamagumbi aliqela. Imigangatho yesamente enamabala amnyama kunye nesilingi zeetin ziyenza ibe ntle nyhani.
Indawo yekhitshi elincinci inefriji encinci ne-microwave kunye netafile nezitulo. Bukela umboniso wakutshanje weNetflix ovela kwisitulo esitofotofo okanye i-sips kwikomityi yekofu kwiveranda engaphambili. Yonwabela ipikniki kwindawo ephandle enendawo yokugalela amalahle. I-Southwest Oklahoma sunsets ziluncedo ngokuqinisekileyo.
Xa kumnyama, kutsha imilenze kwindawo yomlilo ephandle okanye uphumle phantsi kweenkwenkwezi ngasemva kweoyile yethu yakudala, ekumgama omfutshane ukusuka kwindlu yamaplanga.
Bobabini abantwana nabantu abadala baza kukuthanda ukurhuqa amahashe nokudlala imidlalo yebhodi endala yefashoni. Ungalibali ukuthatha iinkumbulo ezingapheliyo kwiifoto zethu ezinomtsalane.
ISANDUL 'UKUVULWA: Ngenxa yokuba sikwazi ukwamkela abazingeli abaninzi kunye nabadobi, sifuna ukwenza ezi ndwendwe zibe lula ngakumbi ngokubonelela ngesikhululo sokucoca imidlalo yangaphandle. Phakathi kwendlu yethu enevaranda nezindlu zamaplanga.
Siseziimayile nje ezintathu ukusuka kwindawo yokungena kwiiWichita Mountains Wildlife Refugees. Umzila webhayisekile ohamba ngebhayisekile ujoyina indlu uze ubaleke kuyo yonke iWildlife Refugees. Ngaphantsi kweemayile eziyi- ukusuka kwiQuanah Parker 's Star House nemizuzu eyi- ukusuka e-Landton Fort Sill kunye ne-Medicine Park enembali, ininzi into onokuyibona uze uyenze kufutshane.
Izinto ezinokusetyenziswa kwindlu yamaplanga ziquka:
* a/c kunye nobushushu
* ifriji encinci *
* iayini enebhodi yokuayinela
* umatshini wokwenza ikofu okomityi enye
* isixhobo sokomisa iinwele *
* isikrini esineflethi i-smart tv kunye neNetflix ziqukiwe
* igrili yamalahle *
* indawo yokuphumla ejonge inkwenkwezi phezu kweoyile yakudala
* i-hammock *
isikhululo sokucoca umdlalo seendwendwe zethu
zokuzingela * igumbi lokuhlamba impahla elinomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla (lifumaneka iiyure eziyi-24 ibe likwindlu yakho, lisetyenziswa nangabanye abatyeleli)
IBunkhouse ISANDUL 'UKUVULWA
isakhiwo esiyi-2400 square foot esinendawo enkulu yokudibana, amagumbi okuhlambela ayi-2, amagumbi okuhlambela ayi-2.5, ikhitshi evulekileyo elinazo zonke izinto ezinokusetyenziswa, kunye nebhari entle. I-bunkhouse inobuhle obufanayo be-rustic njenge-Lazy Buffalo. Bhukisha indlu enevaranda ngoku usebenzisa indlu eyahlukileyo yakwa-airbnb.
4.97 · Izimvo eziyi-191
UMzantsi-ntshona we-Oklahoma utyebile ngeMbali kwaye ubonelela ngezinto ezingenasiphelo zokwenza kunye nokufumanisa.
I-CACHE, OKLAHOMA - idolophu yethu
Zitye kwenye yeekhefi zethu zasekhaya okanye u-odole ukutya okukhawulezayo ukonwabela isitayile sepikiniki kwiCache Park. Abantwana bayayithanda i-splash pad yethu entsha kunye nezixhobo zendawo yokudlala. Ipaki kwakhona inendawo enkulu egangathiweyo yokuhamba kunye nomzila webhayisekile. Ukuba ungumntu othanda imbali, iQuanah Parker's Star House ikufuphi. Indlu enamabali amabini iyaziwa ngeveranda yayo eyahlukileyo eneenkwenkwezi ezimhlophe ezinqula uphahla. Iintsomi ezininzi zabaphuli-mthetho abadumileyo uBelle Starr kunye noJess James kwakunamarhe okuba bazulazule kwindawo yethu. Ngaba iya kuba nguwe oza kufumana impango yabo efihliweyo?
INDAWO YASE-WICHITA IKHUSELEKO YEZILWANYANA ZASENDLE – iimayile ezi-3
Indawo yokusabela yezilwanyana zasendle ithatha iihektare ezingama-59000 kunye nekhaya kwiinyathi zoluhlu lwasimahla, iinkomo zophondo olude, kunye nezinye iintlobo. Misa kwiziko leeNdwendwe ngobutyebi bolwazi kuzo zonke iindawo ezikhangayo zokuKhusela ezibandakanya iSixeko esiNgcwele, iQuanah Parker Lake, ihlathi elinxuseneyo, umngxuma ozinyawo ezingamashumi amane, kunye nomzila wegadi yaseCharon.
I-MEERS & MEDICINE PARK – ngaphantsi kweemayile ezili-15
Thatha uhambo olubukekayo uye eMeers idolophu eyaziwa ngeentsuku zokungxama kwegolide. Uluntu lwaseMelika, iMedicine Park, ludlule nje kwiNtaba yaseScott.
I-LAWTON - imizuzu eyi-10 ukuya kwe-20
ILawton sisixeko esikhulu kwaye inemisebenzi efana nekhasino, iMax Movie Theatre, ivenkile, ipaki yamanzi, kunye neendawo zokutyela. IWalmart, iAkhademi, kunye neThagethi kukuhamba okufutshane kuhola wendlela.
FORT SILL - imizuzu engama-20
I-Fort Sill sisithuba sokugqibela esisele sisebenzayo somkhosi esakhiwa ngexesha lemfazwe yaseIndiya kwaye likhaya loMkhosi weArtillery wase-US. Inkokeli edumileyo yaseMelika yaseChiricahua Apache, iGeronimo, ingcwatywe kumangcwaba aseFort Sill.
Siye sahlala eMzantsi-ntshona Oklahoma ngaphezu 60 iminyaka. Siyayithanda idolophu yethu kwaye sinethemba lokuba uya kwenza iinkumbulo ezininzi ngexesha lokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Larry & Julie
ILazy Buffalo inengxaki yokungena simahla. Ikhabhinethi yakho iya kuba nephedi yesitshixo.
Ngomhla wobhukisho lwakho, ungazijongisa ngokwakho nangaliphi na ixesha emva kwentsimbi yesine.
* Ukuzihlola kuphambi kwentsimbi ye-11am.